Ogaden News Agency (ONA) – Dag Dag – Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Oo Weeraray Rakaab Bas Saran Oo Ka Soo Baxay Qabridahare Iyo Film Qaali ah Oo Fashil Ku Dhamaaday. Noora Afgaab Report
Dag Dag – Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Oo Weeraray Rakaab Bas Saran Oo Ka Soo Baxay Qabridahare Iyo Film Qaali ah Oo Fashil Ku Dhamaaday. Noora Afgaab Report
Ina Ilay, Shifraw teklemaryam iyo Abay Sahay oo ka Dagay Magalada Qabridahare Galabta ..
Magalada Qabaridahare Ayaa Ciidamada Itoobiya Ee Dagan Ku soo Rogeen Xayiraad xaga Socodaalka ah iyadoo markii Horoba jIrin socod Fiican.
Taasoo jirta ayey gawaadhidii ama basaskii Ka soo bixi jiray Qabridahare soona aadi jiray magalada Jigjiga u sheegen saaka cidamada fadaralku in ayana bixi karin Gabi ahaanba. Ka dib wada yaasha baabuurta ayaa aaday xafiisyada maamulka iyo xeryaha Luyupoliceka waxayna u sheegeen amarka la faray. Maamulka magalada iyo Ciidamada hawaarinta ayaa isla qaatay inay baxaan baabuurtu. Hadaba Gaadhigi Ugu Horeyey ee baxay ayay dhexeda u galeen ciidamada itoobiya Ee Luuqada ahmaariga lagu yidhaahado Makalakiyaa-ciidamadan ayaa iska dhigay jabahada ONLF Ee u dagaalanata Gobonimada Gobolka Ogaden, rasaasna ooda kaga qaadeen.
Arintaa markay dhacday ayaa ciidamo la socoday oo luyupolice ahaa oo aan bad neen ayeyey rasas Ooda Isaga qadeen waxana laga taagroonaday ciidamada luyupoliceka
Dadka Rayidka ah ee saraa baska ayaa waxaa dhimatay inta la hubo ilaa hadda 6Ruux halka dhaawucu Gaadhayo 10yo Ruux. Dadka dhintaya waxaa ka mid ahaa oo naloosoo sheegay ilaa hadda wiil iyo hooyadii, gabdh ina Carab khuuriye ah iyo 3ex qof oo naloo sheegay inau Cabdi iley qaraabo dhow yihiin oo ahaa kuwii baska amray inuu boxo.
Ciidamadan ayaa Bililiqeestay Kuwii Hawarinta iyo Rakabkii shacabka waxaana soo gaadhay goobtii Gurmad Luyupoliceka ah. Hasa ahaatee markay arkeen in ay yihiin ciidamadii Itoobiya, waxay waceen Cabdi Ilay oo markaa joogay magalada Jigjiga Safara kagaga imaday magalada Adis abab. Cabdi Ilay ayaa amaray in ayana wax weerar ah Qadin Asagana sugaan.
Diyaarada Nooca ciidanka ah ayey galabata ku tageen Magalada qabaridahare sarakiil Harar iyo Adis abab ka imaatay iyo Cabdi Ilay waxaana adag xaalada dhamaan Gobolka. Ciidamada Luyupoliceka ee fadhiya Shaygoosh ayaa iyagu gabi ahaanba xidhay jidka sheegayna in ay weerar ku qadayaan Xeryaha mulatariga.
Hadaba falkan ayaa ahaa fal fashilmay Lana rabay in la dhaho ONLF ayaa laysay dad shacab ah sidii horayba U dhici Jirtay.
Filo faah faahin iyo magacayada shacabka lalayey.